Umaki: ukuphathwa kokuhambisana | Martech Zone
Umaki: ukuphathwa kokuhambisana
Ngokuqondile: Ukuphathwa Kwezinhlelo Zokuxhumana Ezizenzakalelayo ze-Ecommerce
NgoLwesihlanu, Novemba 13, 2020 NgoLwesihlanu, Novemba 13, 2020 Douglas Karr
Njengoba ibhizinisi eliku-inthanethi liqhubeka nokukhula, ikakhulukazi ngalesi sikhathi seCovid-19, kanye nonyaka phakathi nonyaka ngesikhathi samaholide, izinkampani ezincane neziphakathi nendawo ziya ngokuya zingena ekulweni kwedijithali. Lawa mabhizinisi ancintisana ngqo nabadlali abakhulu kakhulu, abasungulwe, njenge-Amazon neWalmart. Ukuze la mabhizinisi aqhubeke esebenza futhi ancintisane, ukusebenzisa isu lokumaketha elihambisanayo kubalulekile. Martech Zone isebenzisa izinhlelo ezihambisanayo ukulungisa izindleko zayo nokushayela
NgoMsombuluko, Julayi 21, 2014 Douglas Karr
I-Impact Radius inika amandla izinhlobo zedijithali nama-ejensi ukukhulisa ukubuyiselwa kwemali esetshenzisiwe kuziteshi ezidijithali, ezihamba phambili nezingaxhunyiwe ku-inthanethi. Ubuchwepheshe babo bokumaketha be-SaaS benza ukuba abathengisi babe nombono owodwa wokuhlaziya kuyo yonke imizamo yokuthengisa ngokuqoqa idatha yohambo lwabathengi eyimbudumbudu kanye nezindleko zokumaketha. I-Impact Radius Suite of Products ifaka phakathi i-Partner Manager - shintsha izinhlelo zakho zokubambisana nezamasu ozakwethu. Nciphisa imali yakho yokuthengiselana futhi uthuthukise i-ROI ngenkathi kuthuthukiswa ukushuba, ukuqonda okuhlaziywayo, kanye